Croatia oo ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group D, xili Argantina ay ku soo baxeen booska labaad – Gool FM
Croatia oo ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group D, xili Argantina ay ku soo baxeen booska labaad
Dajiye June 26, 2018
(Russia) 26 Juunyo 2018. Kulanka oo ahaa Mid aad u xiiso badan ayaa waxaa uu u dhaxeeyay xulalka Nigeria iyo Argantina waxaanayna labada xul kusoo xirteen kulanlkooda saddexaad ee Group-ka B.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xiiso badan ee ah weerar iyo weerar celis waxaana qeybta koowaad lagu kala baxay 1-0 uu ku hogaaminayay xulka qaranka Argantina.
Goolka xulka qaranka Argantina. ayaa yimid daqiiqadii 14-aad waxaana u dhaliyay kabtankooda Lionel Messi, kaasoo hogaanka u dhiibay xulkiisa kana dhigay ciyaarta 1-0. Kadib markii uu caawin heer sare ah ka helay Ever Banega.
Labada dhinaca ayaa helay fursado dhowr ah ay shabaqa ku gaaro kareen inta ciyaarta socotay, isla markaana aan lakala marin qeybtii nasashada, balse ugu dambeyn waxaa labada dhinac ay ku kala nasteen 1-0 uu ku hogaaminayay wiilasha xulka qaranka Argantina.
Qeybta labaad markii la isku soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyareed aad loo jecleestay, waxayna sameeyeen kubado weerar iyo weerar celis ahaa
Daqiiqadii 51-aad Nigeria ayaa la timid goolka barbaraha kadib rigoodhe uu u dhigay garsooraha ciyaarta waxaa gool u badalay xidiga kooxda Chelseea Victor Moses oo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1.
Daqiiqadii 86-aad ee ku dhawaad dhamaadka ciyaarta Argantina ayaa markale hogaanka u qabatay ciyaarta kadib markii uu gool u dhaliyay Marcos Rojo oo caawin ka helay Gabriel Mercado.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 uu xulka qaranka Argantina kaga soo baxay group-kan kaalinta labaad, halka Croatia ay ku soo baxday booska koowaad.
Dhanka kale xulka Iceland iyo Croatia ayaa kulankoodii ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo labada xul ay qeybtii hore ku kala nasteen barbaro 0-0.
Laakiin marka dib leysugu soo laabtay qeybtoo labaad ayuu xulka Croatia hogaanka u qabtay ciyaarta kadib markii daqiiqadii 53-aad ee qeybtii labaad ciyaarta gool u dhaliyay Milan Badelj oo ciyaarta ka dhigay 1-0.
Daqiiqadii 76-aad Iceland ayaa dhalisay goolka barbaraha waxaana u dhaliyay Gylfi Sigurdsson.
Laakiin Croatia ayaa markale hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana goolka guusha u saxiixay 90-aad Ivan Perisic oo ciyaarta ka dhigay 2-1.
Maradona oo Niiko ku la camirtay Gabar Nigerian ah gudaha garoonka (SAWIRRO + MUUQAAL)
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii Nigeria vs Argentina?